3,2 tapitrisa dolara lany tao anatin'ny 2 andro amin'ny fanaovana doka momba ny Pixel | Vaovao momba ny gadget
Google mandany $ 3,2 tapitrisa amin'ny doka amin'ny fahitalavitra Pixel ao anatin'ny 2 andro
Ny hevitra hoe ny Google Pixel vaovao misy ifandraisany amin'ny marika Nexus izy io. Tokony hazava tsara fa ny telefaona Google dia iray noforonin'i Google tanteraka ary ny fanamboarana azy dia nankinina amin'ny HTC, fa ny hevitra sy ny hevitra dia avy any amin'ireo tovolahy ao Mountain View.
Miaraka amin'ity hevitra ity ao an-tsaina dia afaka miroso amintsika hahatakatra bebe kokoa ny antony izao isika izao eny Nandany vola 3,2 tapitrisa dolara i Google amin'ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra ho an'ny Pixel tsy mihoatra ny 2 andro. Miaraka amin'ny Nexus dia tsy nanakaiky ireo tarehimarika ireo izy, avy amin'ny zavatra efa azontsika lazaina fa hahita Pixel maro isika mandritra ny taona vitsivitsy raha mandeha tsara ny zava-drehetra nefa tsy misy olana lehibe.
Ary tsy vitan'ny hoe hampiasa vola amin'ny tsindry voalohany izy ireo ka hihemotra ny Pixel avy eo, fa izy ireo kosa an-jatony tapitrisa mandritra ny volana vitsivitsy. Fantatr'i Google fa fotoanany izao ary hanararaotra izany izy, indrindra noho ny zava-nitranga tamin'ny Samsung Galaxy Note 7 sy ny iPhone 7 tsy manjombona izay nifandray tamin'ny fifandraisana jack audio 3,5mm.
Google dia tsy maintsy manamarina ireo tarehimarika amin'ny fampiasam-bola amin'ny dokam-barotra, saingy efa nisy ekipa mpanatanteraka iray nilaza fa hisy fampielezan-kevitra dokam-barotra tena lehibe amin'ny resaka fohy ao amin'ny Reuters. Ankehitriny dia ho hita eo raha toa ka mandaitra ireny doka fahita amin'ny fahitalavitra ireny, toa izany koa ve ianao tsy tokony hitazona dokam-barotra amin'ny tranokala sy gazety ary media hafa mahazatra kokoa.
Mipetraka hatrany ny fanontaniana momba ny fisian'ity telefaona ity raha toa ireo any Mountain View izay namindra hatrany ireo mpamokatra hafa, fa ny fiandrasana ny hafa hanao ny telefaona azonao atao no azo antoka fa ny tena tanjona, ankoatry ny fananana rindrambaiko iray izay hanome ny naoty ary hofehezin'i Google sy hokapohiny toy ny olon-kafa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Google mandany $ 3,2 tapitrisa amin'ny doka amin'ny fahitalavitra Pixel ao anatin'ny 2 andro
Manomboka mivarotra solomaso Hololens any amin'ny firenena maro i Microsoft
Samsung dia mitsahatra tsy miditra amin'ny 17.000 tapitrisa mahery taorian'ny nisintomany ny Galaxy Note 7